Laan khayrta Cas oo codsatay in aan Gariiga dadka lagu celin | Somaliska
Dhowr bilood ka hor ayaa maxkamada socdaalka ee magaalada Malmö ay joojisay in dadka iska dhiiba Sweden ee faraha ku leh Gariiga dib loogu celiyo halkaas. Balse maxkmadaha socdaalka ee magaalooyinka Göteborg iyo Stockholm ayaan joojin arintaas. Hay'ada Laan Khayrta cas ayaa codsi u soo jeedisay Sweden in ay guud ahaanba joojiso in ay dadka ku celiso dalka gariiga oo ay Qaramada Midoobay ay ku sheegtay xaalada ay ku jiraan dadka qaxootiga ee halkaas ku nool mid banii'aadanimada ka baxsan. Sidoo kale Dowlada Norway ayaa guud ahaanba joojisay in ay dadka ku celiso Gariiga ka dib markii ay codsi ka heshay maxkamada Cadaalada ee Midowga Yurub. Sveriges Radio
Laan khayrta Cas oo codsatay in aan Gariiga dadka lagu celin
Dhowr bilood ka hor ayaa maxkamada socdaalka ee magaalada Malmö ay joojisay in dadka iska dhiiba Sweden ee faraha ku leh Gariiga dib loogu celiyo halkaas. Balse maxkmadaha socdaalka ee magaalooyinka Göteborg iyo Stockholm ayaan joojin arintaas.
Hay’ada Laan Khayrta cas ayaa codsi u soo jeedisay Sweden in ay guud ahaanba joojiso in ay dadka ku celiso dalka gariiga oo ay Qaramada Midoobay ay ku sheegtay xaalada ay ku jiraan dadka qaxootiga ee halkaas ku nool mid banii’aadanimada ka baxsan.
Sidoo kale Dowlada Norway ayaa guud ahaanba joojisay in ay dadka ku celiso Gariiga ka dib markii ay codsi ka heshay maxkamada Cadaalada ee Midowga Yurub.
Laanta Socdaalka oo soo daabacday isbedalka lagu sameeyay shuruuda labo sano